Odisha Goolasha Todobaadka ah Goobta ugu fiican ee safaradii usbuuca
Odisha Goolasha Toddobaadka ah
Mar walba way adag tahay in la qorsheeyo safarka gaar ahaan markaan shaqeyno 9 ilaa 5 maalmaha shaqada. Laakiin waxa ku saabsan maalmaha fasaxa ah? Waxaa jira maalmaha 52 dhamaadka sanadka. Sidee baad u isticmaalaysaa? Shakhsiyaad tiro badan oo ka soo jeeda meelo badan oo safar ah oo ku salaysan inay u maleynayaan inaysan haysanin waqti ku filan oo ay ku tagaan meel kasta oo kale si kastaba ha ahaatee xarunta dukaamada ama tiyaatarka filimada. Si kastaba ha ahaatee, taasi maahan habka ugu fiican ee lagu noolaan karo! Nidaamka ugu fudud ee lagu xoojiyo fasaxyadaada dhammaadka toddobaadyada ah waa adigoo ku socdaalaya dalxiis gaabis ah oo loo gooyo Odisha Weekend oo la socota Sandbirds Tours.
Socdaalka dhab ahaantii macnaheedu maahan inaad u baahan tahay inaad duulisid tiro badan oo mile ah si aad u tagto meesha aad ku socotid. Mararka qaarkood waxaad u baahan tahay wiigag iyo baabuur leh bamka buuxa ee shidaalka.
Xirmooyinka dalxiiska ee safarka ah ee kuxiran goobaha dalxiiska ee fasaxyada caanka ah waxay soo noqdeen inay noqdaan kuwo ciriiri ah oo ka mid ah dalxiisayaasha ajnabiga ah iyo kuwa gudaha. Rabitaanka rikoodhada si loo tixgeliyo danaha kala duwan ee dhammaadka fasaxyada todobaadka ayaa awood u siiyay Sandbirdhiga si loo sameeyo qiiro xamaasad leh oo weliba waxa kale oo ay heleen waxyaabo waxtar leh oo ururku u leeyahay kalsoonida macaamilka iyo qadarinta. Sidaasi darteed, baakadaha la sameeyay qiimeyn qotodheer ah waxay ka kooban yihiin Bhubaneswar, Puri, Konark, Chilika, Bhitarkanika iyo in ka badan.
Goobaha loo yaqaan 'Odisha Weekend' ayaa waxaa si gaar ah loogu soo diyaariyay madadaalada iyo dabiiciga, safarrada macaamiisha, safarro xiiso leh qoys iyo saaxiibo iyo goobo xiiso leh oo loogu talagalay dabeecada dabiiciga ah.
Meelaha loogu talagalay dhammaan safarka iyo baakadaha waxaa ku jira quraac dhamaan xarumaha dalxiiska. Doonta ugu casrisan ee baabuurta raaxada ah iyo tababarayaasha Shakhsiyaadka khibradda leh iyo tababaran waxay ku jiraan amarka macaamiisha. Guryaha Elegant oo leh qalabka ugu dambeeya ee maskaxda lagu hayo ayaa loogu talagalay macaamiisha dhammaan meelaha dalxiisayaasha ugu sareysa ee Odisha.
Bandhigga Ruushka Rabshadaha
Booqashada Bhubaneswar Amazing
Booqashada Bhubaneswar-Konark-Puri Tour